FAQs - NIutech Environment Co., Ltd
A: Siya akwazi 10000T / Y, 20000T / Y, 30000T / Y neetalente ezinkulu
A: Akukho yabasebenzi olufunekayo ngexesha imveliso, kodwa ulawulo, ukuhlolwa kunye nokuthuthwa kuphela. Ke 10,000T / Y line, udinga malunga 3-4 yemisebenzi / shift
A: sinyanzelisa ukuba sidibanisa theoretics nokuziqhelisa nokuphuhlisa ubuchwepheshe bethu. Thina iminyaka emininzi amava nokusebenza practical zezityalo pyrolysis yaye safumana waza wenza phuculo kanye ukuguqulwa ngokufanelekileyo. Ngelo Kusenjalo, siye zorhwebo kunye ngokuqhubekayo izityalo kumazwe ahlukeneyo kulawulo abaxumi 'abaninzi.
A: Ewe, siya kubonelela isityalo lwabathengi ezikhoyo ukuze kutyelelo sayithi yakho.